NOOCYADA GURYAHA LAGU KORO EE GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Talooyinka ugu sarreeya ee loogu talagalay beeridda iyo daryeelidda dabeecada guriga
Monstera waa geedka qurux badan oo aad u cajiib leh. Waxay ku dhacdey jacayl badan oo ubaxlayaasha ah ee loogu talagalay qaababka aan caadi ahayn iyo sida ay u egyihiin daryeelkooda. Duurjoogta, warshadkan dilka ah waxaa laga helaa Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika, laakin maanta waxaan eegeynaa dabeecad ahaan sida xayawaanka iyo sida loo daryeeli karo sida guriga loogu daryeelo.
Sharaxa dhirta dabiiciga ah ee Monstera
Monstera waxay leedahay lahjadaha Cudurka. Guud ahaan, qoyskani wuxuu leeyahay qiyaastii konton kala duwan oo dhir ah, qaabka, dhererka iyo dhererka. Monstera oo caws caleen ah oo caleen ah, kaas oo mararka qaarkood xididdada cirifka lagu xiro, iyo dhagax qaro weyn ayaa dhirta dhirta ka dhigaa.
Caleemaha ubaxa waa cagaar madow iyo dhalaalaya qorraxda. Marxalad gaar ah ee koritaanka, godadka waxaa la sameeyaa iyaga, kuwaas oo markaa loo beddelay meelo. Qaabka caleemaha ee dhammaan noocyada kala duwan waa qoyaan-wadnaha, qaabkoodu wuxuu gaari karaa 90 cm dherer. Maadaama ubaxyada ubaxa ah lagu arki karo duurjoogta, sida guriga dhexdiisa waxay dhacdaa marar dhif ah.
Monstera way kala duwan tahay dhirta kale ee gudaha ah ee koritaanka degdegga ah, taas oo ka dhigaysa inay u baahan tahay meelo badan. Waxay noqon kartaa quruxda cajiibka ah ee jardiinooyinka jilicsan, halkaas oo dhirta ay dareemayso oo kaliya weyn. Waxaa sidoo kale laga heli karaa guryaha xafiisyo badan iyo kuwa dalka.
Ma taqaanaa? Magaca ubaxa wuxuu ka yimaadaa ereyga caanka ah ee caanka ah (waa mid cajiib ah, xamaasad leh), inkastoo qaar ka mid ah ubaxlayaasha ayaa sheeganaya in magaca uu ka yimid ereyga (monster).
Noocyada guryaha lagu koro ee guriga
Dhammaan guryahoodu waxay leeyihiin waxyaabo gaar ah ee koritaanka iyo dabeecadda ee ku saabsan arrintani waa mid aan ka ahayn (taas oo ah, daryeelka iyo beerista warshad waa in la fuliyaa iyada oo la raacayo shuruudaha la aasaasay). Hoyga, waxay badanaa ku kobciyaan raaxo madow ama soo jiidasho leh.
Doorashada meel loogu talagalay koritaanka guulaysta
Meesha ugu fiican ee lagu beerayo noocan oo kale ah sida Monstera waa meel gaar ah. Waa inay ku taallaa galbeedka ama dhinaca bari ee daaqada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah in ubax ka ilaaliyo qoraalada, si aanay u kicin muuqaalka cudurka. Sidoo kale, badanaaba ha u dhaqaajin meel bannaan. Monstera ma jecla inay si toos ah u qulqulaan iftiinka qorraxda, markaa waa inaadan dhigin daaqad aad u iftiin leh: iftiinka waa inuu ahaado mid dhexdhexaad ah. Qorraxdu waxay gubi kartaa gubashada ubaxa, taas oo keenta in la sameeyo qaabka mugdiga ah, iyo natiijada - dhimashada geedka.
Shuruudaha loogu talagalay awooda ciidda iyo beeraha
Wixii horumarinta caadiga ah ee ubaxa waa in ay fiiro si ciidda. Inta badan, waxaa lagu iibsaday dukaanka, laakiin waad naftaada kari kartaa.
Dhulka dhulku waa inuu lahaadaa qeybaha soo socda:
dhul wareeg ah;
dhulka caleenta ah;
Dhammaan qeybahaas waa in lagu qaado saamiga 3: 1: 1: 1: 1. Caadada noocan oo kale ah waxay si fiican u nuugi doontaa biyaha waxayna u oggolaaneysaa hawada inay dhex maraan. Doorashada dheriga lagu beero ubax aad u baahan tahay si aad u tixgeliso xaddiga ugu badan ee geedka mustaqbalka. Dheriga weyn ee Monstera, waxay si dhakhso ah u xoojinaysaa nidaamka xididka oo ay bilaabaan in ay horumariyaan ugu dhakhsaha badan, laakiin sida ugu dhakhsaha badan dhirta u gaaro cabbirka weyn, xididdada waxay bilaabaan inay curl iyo dabayl ku wareegsan goobada. Si looga hortago xayawaanka laftigiisu cagajuglaynayo, geeddi-socodka qashinka waxaa lagama maarmaan u ah in la gooyo oo laga gooyo xididdada xad-dhaafka ah. Haddii tani aysan sameynin ubaxa ayaa qalajin kara.
Dheriga wuxuu ka fiican yahay inuu qaato wax ka badan 2-4 cm hore ee dhexroorka. Waa inay noqotaa mid degan oo culus.
Waa muhiim! Si aad u taageertid dabaysha, waa inaad isticmaashaa tuubooyin gaar ah oo lagu dhajiyo waraaqo macmal ah. Sidaas awgeed kuma xadgudbi doonaan dhirta madaxtooyada.
Sida loo abuuro dabeecad guriga ah: dhalmo ee canabkiinna tropical
Si monstera u koraan oo u koraan, waxay u baahan tahay inay hubiso haboon iyo daryeel. Ku rid dherer 5 cm dhererka hoose ee dheriga, ka dibna buuxi weelka ½ miisaankiisa, ka dibna si taxadar leh u dhig dhirta adigoon waxyeeleynin nidaamkeeda xididkeeda, daboolna ciidda haray. Dhammaadka beerashada ubaxa si fiican u waraabiyo.
Muuqaalku waa inuu faafiyaa, waana in la faafiyaa, hababka taranku waxay ku qoran yihiin hoos.
Habka 1. Daraasada muraayada ee mawjadaha hawada
Lakabka kasta waa in uu ahaado ugu yaraan hal rooti hawo iyo hal caleen. Laanta waxaa loo wareejiyaa weel gaar ah oo leh substrate nafaqo, si taxadar leh u waraabiyo oo si gaar ah u koray. Gooyn yaryar ayaa sidoo kale koray iyo sidoo kale monster lafteeda at heerkul ah + 18 ... + 20 ° S, iftiinka kala firirsan iyo gudaha gudaha iyada oo aan la qorin.
Habka 2. Marinka dhaliinka
Habkani waa waqtiga ugu badan ee waxtarka leh. Si loo gaaro natiijo fiican, habka asaasiga ah ama qaababka dambe waa in la isticmaalaa. Isku darista ciidda ee gooynta dhirta ayaa si madax bannaan loo samayn karaa. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa ciid iyo humus tiro isku mid ah, laakiin ha iloobin dheecaan. Xakamaynta la xushay waxaa lagu dhejiyaa dheriga, rusheeyaa isku dar ah ciidda oo si weyn u waraabiyo. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad ku daboolatid dheriga oo aad ku dhejisid meel aad u iftiimiso, laakiin ma qorraxda. Waraabinta dhirta waa in la sameeyaa laba jeer maalintii. Ka dib muuqaalka xididada ugu horreysa, dhirta waa in lagu dhajiyaa dhar kala duwan oo koray, oo ilaalinaya dhammaan xeerarka.
Habka 3. Dhalashada abuurka
Habka tarankan waa midka ugu waxtar leh, laakiin sidoo kale ugu dheer. First of dhan, waxaad u baahan tahay abuur cusub oo u baahan in la beeray ee isku dar ah nafaqada iyo ubaxiyey xaaladaha raaxo 30 maalmood gudahood. Heerkulka wanaagsan ee abuurka germinating waa ugu yaraan + 20 ° C, nalalka waa inuu shoogaa. Bili bil kadib, caleemaha ugu horreeya waxay bilaabi doonaan inay muuqdaan, dhirta dhalinyarada leh qiyaastii 9-10 caleemood ayaa la arki karaa 2 sano kadib. Monstera koray sidan ayaa loo tixgeliyaa kan ugu xoogan oo ugu cimri dheer.
Sida loo daryeelo dabeecada guriga
Sidii hore loo soo sheegay, Monstera waa geedka aan la qabin, laakiin inkastoo tan, daryeelka (iyo taranka) waa in la fuliyaa iyadoo la tixgelinayo tiro ka mid ah xeerarka khasabka ah.
Waraabiyo dhirta gudaha
Waraabinta Monstera waa tallaabo muhiim ah oo horumarineed. Waxay jecel yihiin qoyaan, laakiin geedka waxay leedahay xilli ciyaareed cad oo ah waraabinta ciidda. Laga bilaabo laga bilaabo guga hore ilaa dayrta goor dambe, ubaxa waa in badan lagu waraabiyaa. Si kastaba ha ahaatee, lakabka sare ee substrate u dhexeeya waraabiyo waa in la qalajiyo. Haddii dhirta la shubo, waxay bilaabi doontaa inay lumiso saamaynta qurxinta, sameynta dhibco madow, iyo marar dhif ah, nidaamka xididka ayaa qudhmi doona. Xilliga jiilaalka, waraabinta waa in la yareeyaa, laakiin ka taxaddar inaadan qalajinaynin xayawaanka.
Biyaha waraabinta waa in ay ahaato heerkulka qolka iyo istaagaan dhowr maalmood ka hor isticmaalka. Sidoo kale xayawaanka waa in la buufiyaa oo si joogto ah loo nadiifiyaa boodhka.
Ma taqaanaa? Monstera waxay ka jawaabeysaa cimilada isbeddelka. On cidhifyada caleemaha dhibcood dhirta ayaa si tartiib ah loo sameeyay, taas oo ah sababta ay ubaxlayaasha badani waxay yiraahdaan ubaxa ayaa ku ooyaya roobka.
Dhammaan dhirta guriga ayaa u baahan in la quudiyo. Haddii ubaxu uusan korin, markaa wax yar ma laha nafaqooyinka. Sidaa darteed, si aan loo yareeyo koritaanka dhirta qaangaarka, waxay u baahan yihiin in la quudiyo laba jeer bishii. Sida bacriminta ku habboon macdanta iyo Bacriminta organic, inkasta oo ubaxyo dhallinyaro ah ma quudin karo.
Noocyada Mashiinka Kabka ah
Si loo kobciyo koritaanka caleemaha cusub waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caarada. Tani waxaa la sameeyaa horraanta gu'ga, iyo marka la gooyo, ugu yaraan saddex knot waa in laga tagaa xagga sare ee gacanta. Mudada dheer ee goynta, waxay sii badanaysaa waxay qaadan doontaa xidid. Gooyo waa in la sameeyaa, oo ka soo baxaya qoyaanka ubaxa 1-2 cm, waana inay ahaato mid toosan. Ka dib markii la gooyo, asliga ah waa inuu ahaadaa budada dhuxusha, iyo haddii jirida u baahan yahay in la rujin karo, jarjarka hoose ayaa la sameeyaa.
Dhammaan wixii ku saabsan beerka loo yaqaan 'monstera'
Mashiinka ayaa lagu bedeli karaa isla marka ay gaareyso hal sano. Ubaxyada dhalinyarada ah ayaa loo wareejiyaa meel kale sanadkiiba mar: guga, marka heerkulka hawadu uusan ka yarayn + 16 ° S. Saddex sano jir ah waa in lagu celiyaa hal mar labadii sanaba hal mar, shan sanona hal sano - mar 4 sano kasta.
Qalabeynta, waa inaad doorataa dheriyo waaweyn. Qalitaan kasta, dhererka dheriga waxaa la kordhiyaa 2-4 cm. Dhinaca hoose ee taangiga waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo dheecaan ka samaysan shafo, dhagaxyo, dhoobo jajaban ama ciid adag. Ubax Young waxay u baahan tahay ciidda liidan ama mid dhexdhexaad ah, kaas oo ka kooban peat, caleen, ciid humus, cows iyo ciid. Wixii dhirta Monstera dilka, carrada acidic si fiican u shaqeeyaa. Intaa waxaa dheer, taageero waa in lagu rakibay xarunta dhexe ee dheriga, kaas oo ka caawinaya dhirta inay ilaaliyaan shuruudaha lagama maarmaanka u ah horumarinta labada ubax iyo xididdada anteenada. Marka transplanting, si taxadar leh uga saarto ubaxa dheriga iyo u guuri weel cusub, si tartiib ah u buuxinta ciidda. Ka dib markaa, dheriga u buuxi dhulka iyo biyaha si fiican. Qaar ka mid ah kuwa jecel ubax waxay leeyihiin su'aallo: "Sidee loo bedelaa xayawaanka leh xididada aalkolada?". Iyada oo loo yaqaan 'transplant type', waa inaad si taxadar leh u daboosho xididdada hawada oo leh dhabar qoyan oo ku dhaji jirida. Marka ay bilaabaan si ay u yareeyaan xididada yar, ka dibna qayb ka ah asliga ah ee warshadda leh caleemo la gooyaa karaa, ku rid weel, oo daboolaya meesha gooyaa dhulka. Tani waxay ku kori doontaa ubax cusub.
Waa muhiim! Haddii sababo aan macquul ahayn in la beerista xayawaanka, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso dheriga dhulka.
Cayayaanka waaweyn iyo cudurrada dhirta
Haddii aadan daryeeynin dhirta, monstera waxay bilaabi doontaa in ay lumiso difaac iyo cuduro kala duwan ama cayayaanka ayaa laga yaabaa inay muuqdaan. Kuwa ugu caansan waa caarada caarada iyo qolofta. Caarada caarada - Tani waa casaan yar oo casaan ah oo jecel dareen diiran iyo qalalan. Waxay u muuqaneysaa dhinaca hoose ee caleemaha waxayna kuxirantahay shabakad. Daaweyn, isticmaal saabuun, oo lagu daaweeyo caleemo. Ka dib saddex saacadood ka dib qaabsocodka, caleemaha waxaa lagu dhaqaa biyo diirran.
Shchitovka ama aphid shield - cayayaanka, kaas oo magaciisa ku heley gabbaad, kaas oo daboolay jidhkiisa oo dhan. Dadka waaweyn ee midabka brown on geedka ma guurto, laakiin dirxiga waa hufan oo u jilicsan ilaa muraayadaha oo dhan jirka. Waxay si dhakhso ah u dhufanayaan, iyo si ay uga takhalusaan cayayaankan waa in ubaxa lagu buufiyaa biyo saabuun ah, ka saarida dirxiga iyo dadka waaweyn oo leh suuf. Samee nidaamkan illaa dhammaadka dhamaystiran ee dulin.
Nacnac la'aanta horumarinta Monstera waxay u horseedi kartaa in la jarjaro oo laga tago caleemaha, isugeynin asliga ah. Duufaantu waxay keentaa hurdi iyo lakabyo taarikada caleenta, iyo marka ay jirto la'aanta qoyaan, caleemuhu waxay soo noqdaan brown iyo qalalan. Nafaqada la'aanta dhirta ayaa ka tarjumaysa muuqaalka kore ee caleemaha.
Miyuu ubax yahay sunta
Warshad waxaa ku jira juice sun ah. Marka uu maqaarku ku dhaco, wuxuu keenaa barar iyo gubasho, markaad la kulantid, dhiigbaxa mindhicirku wuxuu inta badan dhacaa iyo bararka daran ee xuubka afka. Inkasta oo uu jidhka bani-aadmigu ku kacsan yahay, dalal ka mid ah, casiir macstera waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada qaarkood iyo caawimadeeda ay ku taageeraan difaacidda dadka buka.
Daryeelidda warshadu maaha mid u adag sidii ay u muuqan lahayd jaleecada hore. Waxaa muhiim ah in la raaco dhammaan sharciyada oo ay tixgeliyaan kobcintiisa suurtagalka ah, maxaa yeelay waxay kori kartaa dhowr mitir ballaaran. Khabiiradu waxay kugula talinayaan inay dhigaan qol ballaaran ama beerta jiilaalka.
Waxaan leenahay cherry macaan ee dayrta + VIDEO
Siyaabaha loo ilaaliyo qajaarka xilliga jiilaalka: sida loo ilaaliyo qajaarka cusub
Daaweyn sahlan: miyuu suurtagal yahay in la gashado boric acid dhegta? Khilaafka iyo muddada daaweynta
Lo'da guryaha dabacsan
Caanaha dillaacsan ee digaagga - Ayam Tsemani
Dogwood Wild ayaa si ballaaran loogu qaybiyey Crimean, ee Caucasus, ee Carpathians, Moldova. Waxaa lagu koray gobollo badan oo Russia ah, Poland, Bulgaria, Czech Republic, Talyaaniga, iyo Ukraine, labadaba xarumo gaar ah iyo goobaha xagaaga, beeraha khudradda. Laga soo bilaabo rooti oo dhagaxyo leh oo aan lahayn isku macaan, saxaraha, oo ay ku jiraan tufaaxa, kabriid, miro kale iyo berry. Read More
Waa maxay isticmaalka digitalis ee caafimaadka aadanaha?
Geedka dhirta quruxda leh ee ka soo jeeda caleenta orchids magacaabay Wanda - sharaxaadda iyo sawirkii ubaxa, qarsoonaanta daryeelka